FROM OUR ARCHIVES Fim “Eureka Drama” Nyeere Ọtụtụ Ndị Aka Ịmụta Eziokwu Baịbụl
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Moore Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ụlọ Nche (Nke A Na-amụ Amụ) | Ọgọst 2014
O NWETỤBEGHỊ oge tara akpụ ka oge anyị a. (2 Tim. 3:1-5) Kwa ụbọchị, ọnwụnwa ndị na-abịara anyị na-eme ka a mata ma ànyị hụrụ Jehova n’anya, na-erubekwara iwu ya isi. Jizọs ma na oge anyị a ga-ata akpụ. Ọ bụ ya mere o ji gwa ndị na-eso ụzọ ya na ya ga na-agba ha ume ka ha nwee ike ịtachi obi ruo ọgwụgwụ. (Mat. 24:3, 13; 28:20) N’ihi ya, ọ họpụtara ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi ka ọ na-enye ha “nri ha n’oge kwesịrị ekwesị.”—Mat. 24:45, 46.
Kemgbe afọ 1919 a họpụtara ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, o nyerela ọtụtụ nde ndị na-asụ asụsụ dị iche iche aka ka ha bata n’ọgbakọ Chineke ma soro ‘n’ezinụlọ’ ya. A na-akụzikwara ha Okwu Chineke. (Mat. 24:14; Mkpu. 22:17) Ma, ọ bụghị akwụkwọ niile e bipụtara ka e nwere n’asụsụ niile. Ọ bụghịkwa mmadụ niile na-enwetali akwụkwọ anyị ndị dị n’Ịntanet. Dị ka ihe atụ, ọtụtụ ndị enweghị vidio na akwụkwọ anyị ndị e tinyere naanị na jw.org. Ọ̀ pụtara na ụfọdụ Ndị Kraịst anaghị enwetacha ihe ga-eme ka okwukwe ha sie ike? Ihe ga-enyere anyị aka ịza ajụjụ a bụ ịza ajụjụ anọ dị mkpa.
1. Olee ihe bụ́ isi sekpụ ntị Jehova ji akụziri anyị ihe?
Mgbe Setan gwara Jizọs ka o mee ka nkume ghọọ achịcha, Jizọs gwara ya, sị: “Ọ bụghị naanị achịcha ga-eme ka mmadụ dị ndụ, kama ọ bụ okwu niile nke na-esi n’ọnụ Jehova pụta.” (Mat. 4:3, 4) Ọ bụ na Baịbụl ka e dere okwu Jehova. (2 Pita 1:20, 21) N’ihi ya, Baịbụl bụ isi sekpụ ntị Jehova ji na-akụziri anyị ihe.—2 Tim. 3:16, 17.
Nzukọ Jehova ebipụtala Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ n’ihe karịrị otu narị asụsụ na iri abụọ. E nwere ma nke bụ́ naanị Akwụkwọ Nsọ Grik ma nke bụ́ Akwụkwọ Nsọ Hibru na Akwụkwọ Nsọ Grik. Kwa afọ, a na-ebipụtakwu ya n’asụsụ ndị ọzọ. E nwekwara ọtụtụ Baịbụl ndị ọzọ. E bipụtakwala ha ọtụtụ ijeri n’ọtụtụ puku asụsụ. Otú a e si nwee Baịbụl n’asụsụ dị iche iche dabara adaba n’ihi na Jehova chọrọ ka “a zọpụta ụdị mmadụ niile, ka ha nwetakwa ezi ihe ọmụma nke eziokwu.” (1 Tim. 2:3, 4) Ebe ọ bụ na ‘ọ dịghị ihe e kere eke nke na-apụtaghị ìhè n’anya Jehova,’ obi kwesịrị isi anyị ike na ọ ga-akpọbata “ndị maara mkpa ime mmụọ ha” n’ọgbakọ ya, na-akụzikwara ha Okwu ya.—Hib. 4:13; Mat. 5:3, 6; Jọn 6:44; 10:14.
2. Gịnị mere o ji bụrụ na akwụkwọ ndị anyị ji amụ Baịbụl so ná nri ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi na-enye anyị?
Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ka okwukwe ya sie ike, ihe ọ ga-eme abụghị naanị ịna-agụ Baịbụl. O kwesịrị ịghọta ihe ọ gụrụ, na-emekwa ya eme. (Jems 1:22-25) N’oge ndịozi Jizọs, otu nwoke bụ́ onye Itiopia ghọtara na ya kwesịrị ime otú ahụ. Ọ nọ na-agụ Okwu Chineke mgbe Filip bụ́ onye na-ekwusa ozi ọma hụrụ ya ma jụọ ya, sị: “Ị̀ maara n’ezie ihe ị na-agụ?” Nwoke ahụ zara ya, sị: “N’ezie, olee otú m ga-esi mara, ma ọ bụrụ na mmadụ eduzighị m?” (Ọrụ 8:26-31) Filip nyeere ya aka ka ọ ghọta ihe ọ na-agụ. Ihe nwoke ahụ mụtara ruru ya n’obi, ya ekpebie ka e mee ya baptizim. (Ọrụ 8:32-38) Ọ bụ otú ahụ ka akwụkwọ ndị anyị ji amụ Baịbụl si enyere anyị aka ka anyị ghọta eziokwu dị n’Okwu Chineke. Ihe anyị na-agụ na-eru anyị n’obi, na-emekwa ka anyị mee ihe anyị mụtara.—Kọl. 1:9, 10.
Akwụkwọ ndị a na-ebipụtara anyị so n’otú Jehova si enyeju anyị afọ. (Aịza. 65:13) Dị ka ihe atụ, a na-ebipụta Ụlọ Nche n’ihe karịrị narị asụsụ abụọ na iri. Ọ na-akọwa amụma ndị e buru na Baịbụl, na-enyere anyị aka ka anyị ghọta eziokwu ndị gbara ọkpụrụkpụ dị na Baịbụl, na-emekwa ka anyị na-eme ihe Chineke kwuru. A na-ebipụtakwa Teta! n’ihe dị ka otu narị asụsụ. Ọ na-eme ka anyị mụtakwuo gbasara ihe ndị mara mma Jehova kere, na-akụzikwara anyị otú anyị nwere ike isi mee ihe e kwuru na Baịbụl. (Ilu 3:21-23; Rom 1:20) Ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi na-ebipụta akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl n’ihe karịrị narị asụsụ isii na iri asatọ. Ị̀ na-ewepụta oge agụ Baịbụl kwa ụbọchị? Ị̀ na-agụ Ụlọ Nche na Teta! ọ bụla e bipụtara? Ị̀ na-agụkwa akwụkwọ ọhụrụ niile e nwere n’asụsụ unu?
Nzukọ Jehova na-ebipụtakwara anyị ihe ndepụta ndị e ji ekwu okwu n’ọmụmụ ihe nakwa ná mgbakọ dị iche iche. Ị̀ na-anọ mgbe a na-ekwu okwu, mgbe a na-eme ihe nkiri na ihe ngosi nakwa mgbe a na-agba ndị mmadụ ajụjụ ọnụ? N’eziokwu, Jehova na-enyeju anyị afọ.—Aịza. 25:6.
3. Ọ bụrụ na e nweghị akwụkwọ anyị niile n’asụsụ unu, ọ̀ pụtara na Jehova anaghị enyeju gị afọ?
Azịza ya bụ mba. O kwesịghị iju anyị anya ma ọ bụrụ na e nwere ihe a kụziiri ụfọdụ ndị ohu Jehova a na-akụzighịrị ndị ọzọ. Ọ̀ bụ maka gịnị? Were ndịozi Jizọs dị ka ihe atụ. E nwere ihe ụfọdụ Jizọs kụziiri ha ọ na-akụzighịrị ndị na-eso ụzọ ya ndị ọzọ. (Mak 4:10; 9:35-37) Ma, ọ pụtaghị na Jehova enyejughị ndị na-eso ụzọ Jizọs ndị ọzọ afọ. Jizọs kụziiri ha ihe ga-eme ka okwukwe ha sie ike.—Efe. 4:20-24; 1 Pita 1:8.
Anyị kwesịkwara icheta na mgbe Jizọs nọ n’ụwa, e nwere ọtụtụ ihe o kwuru na ọtụtụ ihe o mere a na-edeghị na Baịbụl. Jọn onyeozi dere, sị: “N’eziokwu, e nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ Jizọs mere, bụ́ ndị, ọ bụrụ na e dee ha edee n’ụzọ zuru ezu, m chere na ụwa apụghị ịba akwụkwọ mpịakọta ndị e dere ha.” (Jọn 21:25) E nwere ọtụtụ ihe Ndị Kraịst mbụ ma gbasara Jizọs anyị na-amaghị. Ma, ọ pụtaghị na anyị amaghị ihe anyị kwesịrị ịma gbasara Jizọs. Jehova emeela ka anyị mata ihe niile anyị kwesịrị ịma gbasara Jizọs ka anyị nwee ike ịna-eso ụzọ ya.—1 Pita 2:21.
Ihe atụ ọzọ bụ akwụkwọ ozi ndị ahụ ndịozi degaara ọgbakọ Ndị Kraịst mbụ. Ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, e nwere otu akwụkwọ ozi Pọl dere a na-edeghị na Baịbụl. (Kọl. 4:16) Ebe ọ bụ na e deghị akwụkwọ ozi ahụ na Baịbụl, ọ̀ pụtara na Okwu Chineke a na-akụziri anyị ezughị ezu? Mba. Jehova ma ihe dị anyị mkpa. Ọ na-enyekwa anyị ihe niile ga-eme ka okwukwe anyị sie ike.—Mat. 6:8.
Jehova ma ihe dị anyị mkpa. Ọ na-enyekwa anyị ihe niile ga-eme ka okwukwe anyị sie ike
Taa, ụfọdụ ndị na-efe Jehova na-enweta ihe ndị e ji akụziri anyị Okwu Chineke karịa ndị ọzọ. Ọ̀ bụ naanị akwụkwọ anyị ole na ole ka e nwere n’asụsụ unu? Ya bụrụ otú ahụ, cheta na ihe gbasara gị na-emetụ Jehova n’obi. Na-amụ akwụkwọ anyị ndị e nwere n’asụsụ unu. Gbalịakwa na-aga ọmụmụ ihe n’asụsụ ị na-aghọta nke ọma. I mee otú ahụ, Jehova ga-eme ka okwukwe gị bụrụ a kwaa a kwụrụ.—Ọma 1:2; Hib. 10:24, 25.
4. Ọ bụrụ na ị naghị enweta ihe ndị anyị tinyere na jw.org, ọ̀ ga-eme ka okwukwe gị ghara isi ike?
E nwere Ụlọ Nche, Teta! na akwụkwọ anyị ndị ọzọ dị n’ebe anyị na-edebe ihe n’Ịntanet, nweekwa ihe ndị e tinyere maka ndị di na nwunye, ndị nne na nna, ndị na-eto eto, na ụmụaka. Ihe ndị a ga-abara mmadụ niile nọ n’ezinụlọ uru ma ọ bụrụ na ha ejiri ha na-enwe Ofufe Ezinụlọ. E nwekwara ihe ndị pụrụ iche a na-etinye n’ebe ahụ, dị ka Ememme Ngụcha Akwụkwọ Gilied na nnọkọ a na-enwe kwa afọ. Ọ bụkwa n’ebe ahụ ka a na-akọ gbasara ụmụnna anyị ndị ọdachi dakwasịrị na ikpe ndị gbasara ụmụnna anyị. (1 Pita 5:8, 9) Ebe anyị na-edebe ihe n’Ịntanet na-abakwa uru n’ozi ọma anyị na-ekwusa. O meela ka ozi ọma ruo ná mba dị iche iche ndị ọchịchị machibidoro Ndịàmà Jehova iwu.
Ma, ị ka nwere ike ime ka okwukwe gị sie ike ma ị̀ na-enwetali ihe ndị anyị na-edebe n’Ịntanet ma ọ bụ na ị naghị enweta ha. Ohu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi ebipụtala ọtụtụ akwụkwọ n’ihi na ha chọrọ ka Onye Kraịst ọ bụla na-amụta ihe ga-eme ka okwukwe ya sie ike. N’ihi ya, i kwesịghị iche na ị ga-azụrịrị ihe ị ga-eji na-aga n’ebe anyị na-edebe ihe n’Ịntanet. Ụfọdụ ụmụnna nwere ike ịgwa ndị ọzọ ka ha gaa n’ebe ahụ ma bipụta ihe ụfọdụ a ga-enye ndị na-agaghị agali. Ma, e nyeghị ọgbakọ iwu ka ha na-eme otú ahụ.
Obi dị anyị ụtọ na Jizọs na-emezu nkwa ahụ o kwere na ya ga na-enye anyị ihe ndị ga-eme ka okwukwe anyị sie ike. Ka oge ikpeazụ a tara akpụ na-eru ọgwụgwụ ya, obi kwesịrị isi anyị ike na Jehova ga na-enye anyị ‘nri n’oge kwesịrị ekwesị.’